Soundcloud မှဂီတကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ Gadget သတင်း
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ငါတို့နေ့သည်သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ပြည့်ဝ၏။ ကောင်းပြီ ကားပေါ်မှာ၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ၊ အလုပ်မှာ၊ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေစဉ်၊ အတန်းတွင်း၌သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်တွင်ဂီတသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးများကိုပျံသန်းစေပြီးအချို့သောအတွေးများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းထဲမှထုတ်ပစ်စေသည်။ ရုပ်ရှင်တေးသံမပါဘဲဘာဖြစ်မည်နည်း။ အတိအကျ: ဘာမျှမ။
ယနေ့နှင့်အင်တာနက်မှကျေးဇူးတင်စကား, ငါတို့ရှိသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုခံစားရန်အဆုံးမဲ့ပလက်ဖောင်းထိုသို့သောအဖြစ် Spotify နှင့် Apple Music, ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောကြီးစွာသောအမျိုးမျိုးကိုမေ့လျော့ခြင်းမရှိဘဲ Youtube ကို ဒါကြောင့်လည်း။ သို့သော်အကယ်စင်စစ်သင်သည် Soundcloud, အနုပညာရှင်အသစ်များနှင့်ဂီတအမျိုးအစားများအတွက်ထူးချွန်စင်မြင့်သိကြပါတယ်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေဆိုသွားမည်။ SoundCloud မှသီချင်းများကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။ စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လုပ်ပါ။ သင်ကအရမ်းရိုးရှင်းကြောင်းသင်မြင်နိုင်ရန်နည်းလမ်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
1 SoundCloud မှသီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တရားဝင်နည်းလမ်း
2 SoundCloud မှသီချင်းများကိုကူးယူရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်း
3 သင်၏ browser တွင် extension ကိုအသုံးပြုခြင်း
သင်သိပြီးသားဖြစ်သည် SoundCloud မှသီချင်းများကူးယူရန်တရားဝင်နည်းလမ်းရှိသည်ဟုတ်တယ်၊ ဒီစနစ်မှာရှိတယ် ကန့်သတ်။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြmethodနာမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဝင်နည်းလမ်းနဲ့ track တွေကို download လုပ်ရတာအရမ်းလွယ်လွန်းတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့နားထောင်နေသည့်သီချင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမီနူးကိုကြည့်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည့်areaရိယာ၌ပင်ရှိသည်။ သီချင်းအချို့ ငါတို့အဘို့အခလုတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် ကုန်ချ။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် အဲဒါကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
၎င်းသည် Soundcloud မှသီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောတရားဝင်နည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကံမကောင်းသည် ငါတို့လိုချင်တဲ့သီချင်းအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောအရာကြောင့်အချို့အနုပညာရှင်များသည်မည်သူမဆိုသူတို့၏သီချင်းများကိုအခမဲ့ download ပြုလုပ်နိုင်ရန်မလိုလားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကတော့သင်တတ်နိုင်သည် တစ်ကြိမ်မှာသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို download လုပ်ပါသီချင်းတစ်ပုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သီချင်းစာရင်းတစ်ခုထက် ပို၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ရှည်လျားပြီးငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်ကစာရေးသူအားတရားဝင်ခွင့်မပြုသည့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသင် download လုပ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်စရာအခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ အခြားနည်းလမ်းနည်းလမ်းများ။ ၎င်းသည်တရားဝင်နည်းလမ်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကို SoundCloud ကအတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲကုမ္ပဏီ၏အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များအရသိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာ၏အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသောနည်းလမ်းများအတိုင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါပြီ။ သို့သော်၎င်းသည်တရားဝင်ထောက်ခံမှုမရှိကြောင်းနှင့်၎င်းသည်တစ်ခဏမှနောက်တစ်ခုသို့သူတို့အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်ကြောင်းသတိရရမည်
သင်၏ browser တွင် extension ကိုအသုံးပြုခြင်း
SoundCloud မှသီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာaကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည် browser extension ကို။ ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ extension များစတိုးအမျိုးမျိုး၌ရရှိနိုင်သူများအနက်ကျွန်ုပ်တို့အနှစ်သက်ဆုံးမှာတစ်ခုဖြစ်သည် SoundCloud ဒေါင်းလုပ်အခမဲ့ Chrome or SCDL SoundCloud ဒေါင်းလုပ် Firefox အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Chrome extension ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြရန်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း Firefox ၏အဆင့်များမှာအလွန်ဆင်တူသည်။
ငါတို့ install လုပ်တယ် အဆိုပါ extension ကို SoundCloud ဒေါင်းလုပ်အခမဲ့ ကျွန်တော်အသုံးပြုသော browser ပေါ် မူတည်၍ Chrome သို့မဟုတ် Firefox အတွက် SCDL SoundCloud Downloader အတွက်ဖြစ်သည်။
ငါတို့သုံးတယ် Soundcloud ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ချင်တဲ့သီချင်းကိုရွေးလိုက်တယ်။
download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို download လုပ်ရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီ၏အောက်တွင်သာရှိသည်။ သီချင်းစာရင်းအပြည့်အစုံကိုကျွန်ုပ်တို့ download ပြုလုပ်လိုပါက၎င်း၏ထိပ်ရှိ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သီချင်းများကိုပုံမှန်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါက extension ကိုအသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်တေးဂီတကိုမကြာခဏမကူးယူပါက SoundCloud ရှိသီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းရှိသည် ဘာမှထည့်စရာမလိုပါဘူး။ လက်ျာလွယ်လွယ်ကူကူအသံ? ကောင်းပြီ, လုပ်ဖို့ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာရန်ရှိသည် url ကူးယူပါ ကျွန်တော် browser ၏ထိပ်မှလိုချင်တဲ့သီချင်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပါ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်ပ။ ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည့်နည်းလမ်းနှင့်ဆင်တူသည် Youtube မှသီချင်းများကို download လုပ်ပါ.
ယခင်နည်းလမ်း၏ extension များကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့အား download လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် website များစွာရှိသည်။ ဤဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝဘ်ကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ကလစ်ဒီအလုပ်အတွက်အတော်လေးဘုံ။ လိုက်နာရမည့်အဆင့်များသည်ယခင်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
ငါတို့သီချင်းရှာတယ် SoundCloud ကနေ download ဆွဲချင်တယ် ကျနော်တို့ URL ကိုကူးယူ browser ၏လိပ်စာဘားမှ။
ငါတို့ ဦး ဆောင်ခဲ့တယ် al sitio ကို web de ကလစ်.
ကျနော်တို့ URL ကို paste လုပ်ပါ နှင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ download,.
ကျနော်တို့အကြောင်းပြချက်အများစုသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ဖော်ပြရန်ရှိသည် အနုပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ပုဒ်တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူး အကြောင်းမှာသူတို့သည်၎င်းတို့အားအခြားတစ်နေရာတွင်ရောင်းရန်ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကသူတို့အလုပ်ပဲ၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဆီကငွေပြန်ရချင်တယ်။ အကယ်၍ ထိုအရာမရှိပါကဂီတသည်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ ဤနည်းလမ်းကိုတာဝန်သိစွာအသုံးပြုရန်သတိရပါ။ သင်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်တွေကိုထောက်ပံ့ချင်ရင်၊ အဲဒါကိုသတိရပါ iTunes ရောအခြား platform နှစ်ခုလုံးပါ ဒီဂျစ်တယ်ခွင့်ပြုသည် သီချင်းများနှင့်အယ်လ်ဘမ်များဝယ်ယူ, သင်သည်သင်၏သီချင်းတွေကိုတစ် ဦး မှာသိမ်းဆည်းထားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ပင်ပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးကိုဒါကြောင့် ဥပဒေရေးရာ နှင့်ရှိသမျှတို့ထက်, နိုင်ဖြစ်ခြင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ download လုပ်ပါ သင်၏စက်ကိရိယာများပေါ်တွင်၎င်းတို့ကိုထားရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Soundcloud မှဂီတကိုဘယ်လို download လုပ်မလည်း
Google Pixel 3၊ Google Slate နှင့် Google ထုတ်ကုန်အသစ်များအားလုံး